Ismaaciil Daahir | maktabadda | Af-Soomaaliga
Tag Archives: Ismaaciil Daahir
Boqorkii Lahaa Dhagaha Dameerka
24/04/2014 Sheeko GaabanIsmaaciil Daahirmaamule
Bari hor, ayaa waxaa jiray Boqor kaasoo lahaa dhago balaqsan oo u qaab eg dhagaha dameerka. Boqorku waxuu aad ooga xishoonayay dhagihiisa badanaana wuu dabooli jiray marka uu joogo meel layskugu imaado sidaa darteed dadka tuulada looma oggolaan inay ogaadaan sirtiisa. Qofka kali ah ee waligii arkay dhagaha boqorka waxuu ahaa timo jarihiisa.
Badanaa boqorku waxuu oogu digaa timo jarihiisa, ‘waa inaad balan qaadid inaadan waligaa u sheegin qofna in aan leeyahay dhago u eg kuwa dameeraha ama waxaan u soo diri doonaa ilaaladayda gurigaaga waxayna kuu qaadi doonaan xabsigayga halkaas oo ku jiri doontid inta noolashaada ka hadhay.’ Timo jaraha waxuu la kulmay xaalad aad u adag inuu ilaaliyo sirtan sababtoo ah waxuu rabay inuu ooga sheekeeyo dhamaan dadka tuulada dhagaha boqorka, laakiin badanaa waxuu xasuustaa digniinta boqorka waxuuna aad ooga qarinayay sirta xataa naftiisa sannado badan.
Laakiin subax, ayuu timo jarihii toosay waxuuna go’aansaday in uunan ka qarin sirta naftiisa mar danbe. Wuu labistay waxuuna ka baxay gurigiisa waxuuna ooga socdaalay tuuladii baadiyaha meel uu xaqiijiyay in uu kaligii yahay. Ka dibna waxuu helay meel caws balaadhan ka baxay waxuuna bilaabay inuu god ku qodo gacmiisa.
Oogu danbayntii timo jarihii waxuu qoday god aad u dheer, markii uu ku qancayna shaqdiisa wuxuu afka saaray godka waxuuna ku qaylyay codkiisa oogu dheer, ‘ Boqorku waxuu leeyahay dhagaha dameerka oo kale! Boqorku waxuu leeyahay dhagaha dameerka oo kale!’
Markii uu ku dhawaaqay sirta boqorka, timo jaruhu waxuu dareemay wanaag badan. Ka dibna waxuu ku daboolay godkii ciid iyo caws waxuuna ku soo noqday gurigiisa, asagoo naftiisa ku qancinaya inuuna jabinin aaminaadii boqorka.
Sannado badan ka dib, waxaa jiray iskuul laga dhisay meel ku dhagan godka, waxaana goob ciyaar laga sameeyay agagaarka godka meel ay caruurtu ku ciyaaraan marka ayna fasal lahayn.
Maalin, marka ay caruurta oo dhan ku ciyaaraysay goobta ciyaarta, wiil yar ayaa daboolka ka qaaday godka oo lagu qariyay ciid iyo caws. Si dagdag ah ayuu willkii ooga qofay ciidda waxaana si dagdag ah ooga soo wada baxay godka cod dheer oo raacay hawada si ay dhamaan u maqlaan caruurta…
‘Boqorku waxuu leeyahay dhagaha dameerka oo kale! Boqorku waxuu leeyahay dhagaha dameerka oo kale!’
Caruurtu aad ayay oola yaabeen inay maqlaan codka timo jaraha ee hawadu waddo, wayna ku qosleyn waxa ku saabsan sirta ee dhagaha boqorka. Markii ay tageen guriga maalinkaas, caruurtii waxay u sheegeen sirta waalidkood. Ka dibna waalidiintu waxay u sheegeen sirta qoyska intiisa kale. Ka dib qoys kasta waxuu u sheegay sirta dhamaan saaxiibadood. ‘Boqorku waxuu leeyahay dhagaha dameerka oo kale’ way isla qosleyn midba midka kale.
Si dhakhso ah tuulada oo dhan waxay ogaatay waxa ku saabsan dhagaha boqorka dhamaanna way wada qosleyn sababtoo ah hadda waxay ogaadeen sababta oo badanaa boqorku u duubto madixiisa mar kasta oo uu u soo baxo dadweynaha.
Waa hagaag, in badan ma ayna qaadan inta uuna ogaanin boqorku in qofkasta uu ogaaday sirtiisa aad ayuu u yaxyaxay aad ayuuna u xanaaqay. Boqorku waxuu ogsoonaa in uu hal nin oo kali ah uu ogaa dhagihiisa kuwa dameerka u eg sidaa darteedna waxuu u diray ilaaladiisa guriga tima jaraha. Ilaaladu waxay soo qabteen tima jarihii waxayna ku soo jiideen meeshii waxayna ku rideen ninka xabsigii uu u sheegay in inta noolashiisa ka dhiman uu ku qaadanayo.
Tima jaruhu waxuu ka baryay boqorka inuu iska sii daayo, laakiin boqorku waxuu ku yidhi tima jarihii, ‘Waxaad balan qaaday in aadan sheegin sirteyda laakiin waad ka qarin wayday naftaada. Waan ku aaminay waadna i khiyaantay. Arrintan darteed waxaan ku qaadan doontaa inta noolashaada ka hadhay xabsiga waxaadna baran doontaa inay badanaa tahay muhiim in la ilaaliyo balamaha dadka kale oona la sheegin siraha.’
Sidaa darteedna tima jaruhu waxuu ku jiray xabsiga inta noolashiisa ka hadhay badanaana waxuu ka shalaayay sheegidda sirta boqorka markii uu kula ballamay inuuna sheegin.